ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ် ဒသမမြောက် ရာမဘွဲ့ခံယူကာ ရာဇဘိသိက် သွန်းနန်းတက်ပွဲ ကျင်းပ၊ သုံးရက်တာ သ?? - Yangon Media Group
ဘန်ကောက်၊ မေ ၄
ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ် မဟာ ဝဇီရာလောင်ကွန်းသည် ဒသမ မြောက်ရာမဘွဲ့ခံယူကာ နန်းတက်ပွဲကို သုံးရက်ကြာ ခမ်းနားသိုက်မြိုက် စွာ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်ဟု မေ ၄ ရက် သတင်းများအရ သိရှိရသည်။ သို့သော် မေ ၄ ရက်က ကျင်းပသော နန်းတက်ပွဲ၌ ထိုင်းနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများစွာတို့တက် ရောက်ကာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြ၍ အစည်ကားဆုံးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ် မေ ၅ ရက်က နဝမမြောက် ရာမဘွဲ့ခံ ဘုရင်ဘူမိဘော အဒူလျာ ဒက်ခ်ျ၏ နန်းတက်ပွဲပြီးနောက် ယနေ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လူသူ ပရိသတ်အစည်ကားဆုံး နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လေသည်။
နန်းတက်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ထိုင်းဧကရာဇ်သည် ယာယီစံနန်းတွင် ဘိသိက်ခံရေစင်သွန်းလောင်း ခြင်းနှင့်ချိုးရေသုံးသပ်ခြင်းများလည်း ပါဝင်သည်။ ထို့နောက် ထိုင်းဧက ရာဇ်သည် ဆွေတော်မျိုးတော်များ၊ တော်ဝင်မိသားစုများ၊ အစိုးရအဖွဲ့ ဝင်များနှင့် နန်းတွင်းအရာရှိများ ခြံရံလျက် ကျေးတော်မျိုး ကျွန်တော် မျိုးပြည်သူများအား သြဝါဒစကား မြွက်ကြားမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းအခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံ တကာသံအမတ်များနှင့် သံအရာ ရှိများလည်း တက်ရောက်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်ထုံးစံအရ အခမ်းအနားများ လည်း ကျင်းပပြုလုပ်ကြမည်ဖြစ် သည်။ သာသနာပိုင်ဆရာတော် ကြီးများ၏ သြဝါဒစကားများကို လည်း ဘုရင်မင်းမြတ်အမှူးပြု၍ နာယူကြမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားစင် ရှေ့တွင် ဝါဆိုဖယောင်းတိုင်ကြီးများ ဖြင့် ထွန်းညှိပူဇော်ထားမည်ဖြစ်သည်။
ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်၏ ရာဇ ဘိသေက ခံယူပွဲနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ် သော မေ ၆ ရက် တနင်္လာနေ့တွင် ဘုရင်မင်းမြတ်သည် နန်းတော်၌ နိုင်ငံတကာနှင့်အသင်းအဖွဲ့များမှ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာများဖတ်ကြား ခြင်းများအား ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
သာကေတတွင် ယာယီရပ်စဲထားသည့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ပြန်လည် ခန့်ထားရေး ပြည်သူ ၃ဝဝဝ ခန့် ?
မလေးရှားတွင် မီသိုင်းဓာတ်ငွေ့အဆိပ်သင့်၍ ကျောင်းပေါင်း ၁၁၁ ကျောင်း ပိတ်ထားရ